Tu Tu Tha: ဝတ္ထုတို ၅
ကျမဘလော့လေးနဲ့ ကင်းကွာနေတာ ကြာပါပြီ။ ကင်းကွာနေခဲ့ပေမယ့် ရည်းစားကိုလွမ်းသလို လွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ မတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ကိုယ့်တာဝန် မကျေသလို ခံစားရပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းများ ကြောင့်ပါ။ ခုတော့ အကြောင်းပေါင်းသင့်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန် ပြန်တင်ပါတော့မယ်။ ကျမကို သိပ်လွှမ်းမိုးတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ကြိုက်လွန်းလို့ အခါပေါင်းများစွာ ဖတ်ပြီး တခြားသူတွေကိုလည်း ဖတ်ဖို့ (အတင်း) တိုက်တွန်းပါတယ်။ ရိုးရိုးဖတ်ကြည့်ပါလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မဖတ်မနေနိုင်အောင်ကို ပြောတာ။ လူချင်းတွေ့နေတဲ့သူဆို စာအုပ်ကိုငှားသေးတာ။ ပြီးတော့မှ ပြန်မပေးတာ တို့ ပျောက်သွားတာတို့ ကြုံရတာ လည်း အခါခါပါ။ အဲဒါနဲ့ ပြန်ပြန်ဝယ်ရတာလည်း ခုဆို ၃ ကြိမ်မြောက်လောက် ရှိနေပြီထင်တယ်။ အဲဒီစာအုပ်က မူရင်းစာရေးဆရာ ဂျွန်စတိန်းဘတ်၊ တော်တီလာဖလက် ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက် တခုက တကယ့် လူပေလူတေတွေ အကြောင်းကို မချွင်းမချန်သရုပ်ဖော် ထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဆရာ မောင်ထွန်း သူက “တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ” ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ကျမ စာအုပ်အညွှန်းပုံစံ နဲ့ရေးပါဦးမယ်။ အဲဒီတော့မှ အသေးစိတ် ဖော်ပြပါမယ်။ ခုတင်မယ့် “မဆလာနံ့ သင်းတဲ့ညများ” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကလေးကတော့ အဲဒီ တော်တီလာဖလက် လွှမ်းမိုးခံရတဲ့ ဝတ္ထုလေးလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ ဒီထဲက ဇာတ်ကောင်တွေက အပြင်မှာ တကယ် ရှိပါတယ်။ ကျမရဲ့ အကျင့်က ဇာတ်ကောင် တွေကို ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ဖန်တီးလေ့ မရှိပါဘူး။ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုကို စိတ်ကူးနဲ့ ရောမွှေပြီး ရေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဟျူးမားလို့ခေါ်တဲ့ ဟာသဆီကို မရောက်တဲ့ စတိုင်ရာ ဝတ္ထုတို ပုံစံလေးပါ။ ပြုံးရုံလေးပဲ ပြုံးရမယ့် အမျိုးအစားပေါ့။ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစီတုတ်နဲ့ မသွယ်တို့လင်မယား ၂ ယောက် ဘာအရူး ထပြန်ပြီလဲမသိဘူး။ ကြောင်တကောင်လောက် မွေးချင်လို့တဲ့။ ဘေးအိမ်က ဒေါ်ဘူချီက နှာခေါင်းရှုံ့တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ သူတို့တောင် စားဖို့ အနိုင်နိုင်ဟာ ကြောင်ကို ဘာသွားကြွေးမှာလဲ…။
ကိုစီတုတ်နဲ့ အတူ ဆိုက်ကားနင်းဖော်နင်းဘက် ကိုဖေက လူသာ ဆိုက်ကားနင်းတာ၊ အတွေးအခေါ်သမား။ အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံဘဲ ဘာမှလက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။ ခုလဲ သူ့ကို ကိုစီတုတ်ကိုယ်တိုင်က ပြောတာ…။
“ကြောင်တကောင်လောက် လိုချင်လို့ ရှာပေးစမ်းပါဗျာ” ..တဲ့..။
အဲဒီတော့ ကိုဖေတို့စဉ်းစားရပြီလေ။ ကိုစီတုတ် ကြောင်မွေးချင်ရအောင် သူ့အိမ်မှာကြွက်တွေ သောင်းကျန်းနေလို့ လား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကြွက်ဆိုတဲ့သတ္တဝါက သူတို့အတွက် စားစရာအကြွင်းအကျန်မချန်တဲ့အပြင် ကံဆိုးရင် သူတို့ ကိုပါသတ်စားမယ့် သူမျိုးအိမ်မှာ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ စီတုတ်ဆိုတဲ့ကောင် ကြောင်မွေးမြူရေးများ လုပ်မလို့လား။ ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ တနိုင်မွေးမြူရေး လေ။ သူများတွေလို ဝက်တို့၊ ကြက်တို့ မမွေးဘဲ ကြောင်မွေးတာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုစီတုတ်က ကြောင်သားဟင်း သိပ်ကြိုက်ပြီး သူ့မိန်းမ မသွယ်က ကြောင်သားဟင်း အချက်ကောင်းတာ ရွာထဲမှာနာမည်ကြီး ပဲ။ အဲ…. ကြောင်တွေ လက်သည်မပေါ်ဘဲ ပျောက် ပျောက်သွားရတာကိုလဲ ကိုစီတုတ်ရဲ့ လက်ချက်လို့ ဆိုချင် ကြတယ်။ ကိုဖေက တွေးမိတဲ့အတိုင်း ကိုစီတုတ်ကို မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ကိုစီတုတ်တို့ ခါးခါးသီးသီး ဖြစ်လိုက်ပုံများ….။
“ဟာ မဟုတ်တရုတ် ကိုဖေရာ။ ကျုပ် ဒါမျိုးလုပ်ပါ့မလားဗျ။ ကျုပ်ကြောင်မွေးချင်တယ်ဆိုတာ ကြောင်ချစ် လို့ပါဗျာ”
“ခင်ဗျားဗျာ…. ကြောင်ချစ်တယ်လို့ တခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။ ကြောင်ကြိုက်တယ်ဆို တော်သေး”
“အစက မချစ်ပေမယ့် အခုချစ်တယ်ဗျာ… ကိုဖေ… ကျုပ်မူးလို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ခုမှ မနက်ရှိသေးတာ။ လုပ်ပါဗျာ။ ကျုပ်ကို ကြောင်လေး တကောင်လောက် ရှာပေးစမ်းပါ။ အိမ်မှာ မွေးထားချင်လို့။ ကျုပ်ကို ကူညီပါဦး။ ဘယ်သူမှ ကျုပ်ကို မယုံကြဘူး။ ကျုပ်ကိုကူညီမယ့်သူ ဆိုလို့ ခင်ဗျားပဲရှိတော့လို့ပါ”
ကိုဖေစဉ်းစားရပြီ။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ ပုံစံကလည်း တကယ်ကို အကူအညီတောင်းနေတဲ့ပုံ။ ကိုဖေဆိုတာကလည်း စဉ်းစားရင် စဉ်းစား မစဉ်းစားရင် စမ်းသပ် အဲဒီလို စလုံးကိစ္စတွေ လုပ်လေ့ရှိတာ ဆိုတော့….။
“ကဲ ဗျာ ဒီလိုလုပ်။ ကျုပ်ညီမအိမ်မှာ ကြောင်သားလေးတွေ ပေါက်နေတယ်။ နို့ခွဲရင် ခင်ဗျားဖို့ တကောင် တောင်းပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား။ ဒီမှာကိုစီတုတ်။ အချင်းချင်းမို့ ပြောရဦးမယ်။ နို့ခွဲခါစ ကြောင်လေးတွေက စားလို့ မကောင်းဘူးနော်။ ချွဲတယ်”
“ဟာဗျာ… ကိုဖေကလည်း ကျုပ် တကယ်မွေးမှာပါဆိုဗျာ။ ခင်ဗျားကြောင်ကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဘုရားစင်ပေါ် တင်ပြီးတောင် ကိုးကွယ်ချင်သေးတာ”
ပြောပြောဆိုဆို ထွက်သွားတဲ့ ကိုစီတုတ်ကို ကိုဖေ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ငေးကြည့်နေမိတယ်။ လုံးဝ လိုက်မမီ တော့ဘူး….။
ရွာထဲမှာတော့ တကယ့်ကို အုပ်အော်သောင်းနင်းပဲ။ ရာဇာနေဝင်းပြီးရင် ကိုစီတုတ် နာမည် အကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီ။ မသွယ်ကလည်း ပုံစံတွေကိုပြောင်းလို့။ အရင်က နှုတ်ကြမ်း အာကြမ်းနဲ့ သူများအတင်း လည်ပြောရင်ပြော။ မပြောရရင် တယောက်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်။ အဲဒီလိုနေတာ အသားတကျရှိနေရာကနေ ခုတော့ စကားပြော နေရင်းက….
“ခဏနေဦး တော်ရေ…. အိမ်က မီးမီးလေးကို အစာပြန်ကျွေးလိုက်ဦးမယ်” ဆိုတာမျိုး…။
“မီးမီးလေးကလေ သိပ်လိမ်မာတာပဲ။ လူစကားလည်း နားလည်တယ်။ လူလည်း သိပ်ကပ်တာပဲ။ အမယ်လေး အိမ်မှာ ကျမများ မရှိရင် တညောင်ညောင်နဲ့ လိုက်ရှာတော့တာ… သူ့အဖေဆိုရင်လည်း ချစ်လိုက်တာ တုန်လို့…” ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောလားပြောရဲ့။ သူတို့လည်း နေရင်းထိုင်ရင်း ကြောင်မိဘတွေကို ဖြစ်လို့။ ကြာရင် ကြောင်က လူစကားပါပြောတတ်နေပြီ ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်လာဦးမလား မသိဘူး။ ဘေးအိမ်က ဒေါ်ဘူချီကတော့ ကြည့်မရ ဖြစ်နေတာပေါ့။
“သူတို့ကိုယ်သူတို့များ သူဌေးတွေများ မှတ်နေလား မသိဘူး။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကြောင်မွေးတယ်ဆိုတဲ့ အပို အလုပ်ကို ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေမှ လုပ်နိုင်တာ။ ဒီဟာတွေက စားစရာဖြင့် မရှိဘဲ ကြောင်မွေးသတဲ့ တော်” ဆိုပြီး ရွာထဲ အတင်းလည်ပြော နေတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မသွယ်ကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ…။
“မခိုင်ရေ.. ကြည့်ပါဦး။ မီးမီးလေး အရောင်က သုံးရောင်စပ် တွေ့လား။ အဝါရယ် အဖြူရယ် မီးခိုးရယ်။ အဲဒီလို ကြောင်မျိုးက အထီးမရှိဘူးတဲ့။ အမပဲရှိတယ်။ အဲဒီကြောင် အမျိုးအစားကို ကာလီဘိ်ုးလို့ ခေါ်တယ်တဲ့”
မသွယ်တို့ ဘယ်က ဘယ်လို ကြောင်သုတေသန လုပ်လိုက်တယ် မသိဘူး။ ကြောင်မျိုး၊ ကြောင်နွယ်လိုက်ကို ချီပြီး စကားတွေ ပြောနေပြီ။ ရွာထဲကလူတွေကတော့ သာဓု ၂ ကြိမ်ခေါ်ကြတယ်တဲ့။ သုံးကြိမ်ပြည့်အောင်တော့ မခေါ်ရဲသေးဘူး။ ဒီလင်မယားအကြောင်းက မသိမှတ်လို့။ ဒီသတင်းကတော့ ဒေါ်ဘူချီသယ်လာတာ။ အားလုံးလည်း အံ့သြနေကြတယ်။ မခိုင်တို့ မချိုတို့ ရွာထဲက ဦးလှဖုန်းတို့ ဆိုတာ သိချင်လွန်းလို့ ကိုစီတုတ် အိမ် ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်ရတာအခါခါ…။
ကိုစီတုတ်ဆီမှာ အဒေါ်တယောက်ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီအဒေါ်က သြစတေးလျမှာနေတယ်ဆိုပဲ။ ကိုစီတုတ်တို့နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပါပြီ။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဆွေမျိုးဆိုလို့ ကိုစီတုတ်တယောက်တည်း ရှိတော့တာတဲ့။ ခု ကိုစီတုတ်နဲ့ ပြန်ဆုံဖြစ်တာ မကြာသေးဘူး။ အဲဒီအထိက ဘာမှ သိပ်အရေးမပါသေးဘူး။ အဓိကအကြောင်းအရာက အဲဒီအဒေါ်အပျိုကြီးက ကြောင်သိပ်ချစ်တာတဲ့။ ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ ဆိုရင် သူ့အိမ်မှာ ကြောင် ၄၆ ကောင်ရှိသတဲ့။ ပြီးတော့ သူက သူ့ဘဝမှာ ဒီလိုချမ်းသာနေတာ ကြောင်တွေကြောင့် လို့ ယုံကြည်နေတယ်။ အဲဒီအဒေါ်က သူကြောင်ချစ်သလို ကြောင်ချစ်တဲ့သူတွေကိုပဲ ဆက်ဆံချင်တယ်။ ကြောင်ချစ်တဲ့သူကိုမှ အထင်ကြီးတယ်။ ဒေါ်ဘူချီရဲ့ သတင်းက ငြင်းဆိုချက်မရှိအောင်ကို တိကျလွန်းနေတယ်။ ပထမ တခါ သူ အလည်လာတုန်းက ကိုစီတုတ်တို့ လင်မယားကို မုန့်ဖိုးတော်တော် များများ ပေးခဲ့ပြီး ပြောခဲ့တယ်…တဲ့။
“နင်တို့အိမ်မှာ ကြောင်တကောင်လောက် မွေးထား။ ကြောင်စာအတွက် ငါတသိန်းပေးခဲ့မယ်။ နင်တို့အတွက် မုန့်ဖိုးက သတ်သတ်နော်။ ကြောင်လေးကို ဂရုစိုက်။ ငါက ကြောင်ချစ်တဲ့သူကိုမှ စေတနာရှိတာ ကြားလား”
ကိုစီတုတ်တို့ အဒေါ် ပိုက်ဆံတွေပေးပြီး ပြန်သွားတာနဲ့ ကိုစီတုတ်တို့လင်မယား ကြောင်ရှာထွက်တော့တာပဲလေ။ ခုတော့များ ကြောင်ကို မီးမီးလေးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ ကိုစီတုတ် အဒေါ်ဖုန်းဆက်ရင် လူကိုအရင်မမေးဘူး။ မီးမီးလေး နေကောင်းရဲ့လား။ အစားစားရဲ့လား။ အီအီးပါရဲ့လား ဆိုတာမေးပြီးမှ လူကိုမေးတာ။ ဒါတွေက အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုစီတုတ်တို့ကလည်း လူမှ ကြောင်မှ ဆိုတဲ့ အစွဲ မရှိပါဘူး။ အဓိကက ကြောင်ကို ဂရုစိုက်မှ လူကို ဂရုစိုက်ခံရမယ်….။ ဒါကို သူတို့ လင်မယား ၂ ယောက်လုံး သဘောပေါက်ပြီးသား။
လတ်စသတ်တော့ ဒီလိုကိုးလို့ တရွာလုံးက မှတ်ချက်ချကြတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ သူတို့လင်မယား ကြောင် ချစ်နေပြီဆိုတော့ ရွာထဲက ကြောင်တွေအတွက် တရန်အေးရတာပေါ့။
ကိုစီတုတ်တို့တဲနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်တဲ့ ကားအကောင်းစားကြီးတစီး တဲရှေ့မှာရပ်ထားတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အလည်ရောက်နေတဲ့ ကိုစီတုတ်ရဲ့ အဒေါ်က ကိုစီတုတ်အိမ်က မီးမီးလေးကို လာကြည့်တာလေ။ သူတို့လင်မ ယားကတော့ သွား ၃၂ ချောင်းလုံး ဖြဲပြီး အနားမှာရပ်နေတယ်။ ဟိုဘက်အိမ်က ဒေါ်ဘူချီကြီးက ချောင်းကြည့်ပြီး အသေးစိတ်ကို မှတ်သားနေတယ်။
ကိုစီတုတ်အဒေါ်က ကြောင်လေးကို ဟိုပွတ်ဒီသပ်လုပ်၊ ပါလာတဲ့ ငါးကြော်ထုပ် ဖြေကျွေး…။ (ကိုစီတုတ်တို့ သွားရည် တမျှားမျှားနဲ့) ကြောင်လေးနဲ့ စကားတွေ ပြောပြီး ခဏနေတော့….
“ငါပြန်ဦးမယ်ဟေ့” ဆိုပြီး ပြန်သွားပါလေရော။ မသွယ်ကတော့ ကြောင်ကိုချကျွေးထားတဲ့ ငါးကြင်းကြော်တွေ ငါးသလောက်ဥကြော်တွေကို နှမျောသလိုကြည့်ရင်း…
“ကိုစီတုတ်… ကျုပ်တို့ကို ဘာမှလည်း ပေးမသွားဘူးနော်”
“ဟာ နင်ကလည်း နောက်တခါ လာဦးမှာပဲဟာ…. အဲဒီတော့မှ ပေးမှာပေါ့”
“ကျုပ်တို့ ဒီညနေစာ ဆန်ဝယ်ဖို့ မရှိတော့ဘူးတော့ တော်ကလည်း။ နည်းနည်းပါးပါး တောင်းထားလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး”
“ငါ ကိုဖေ့ဆီက နည်းနည်း သွားချေးမယ်ကွာ။ မင်းကလည်း အချီကြီးရဖို့ ဒီလောက်တော့ စောင့်ရမှာပေါ့”
“ဒီမှာ ရှင့်အဒေါ်လာရင် အချီကြီးရမယ် ဆိုပြီး ရှင်ဆိုက်ကားမထွက်တာ ဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲ။ ဝင်ငွေ လုံးဝမရှိ ဘူးနော်… နောက်တခါလာလို့မရရင် ကျုပ်အဆိုးမဆိုနဲ့”
“အေးပါ မိန်းမရာ တိုးတိုးပြောစမ်းပါ။ ဘေးမှာမနာလိုလို့ ချွန်ချင်တဲ့သူတွေ ရှိတာလည်း သိရဲ့သားနဲ့”
အဲဒီအချိန်မှာ ကြောင်ကလေးကတော့ ငါးကြော်တွေကို တဝတပြဲ စားသောက်ပြီး လျှာတောင် သပ်နေပြီ….
မသွယ်က ကြောင်လေးကို မျက်စောင်းတချက်ခဲပြီး ခြေဆောင့်ထွက်သွားလေရဲ့…။
ပြဿနာကို စတင်သူက စာရေးကြီးကိုအေး။ ကိုအေးဆိုတာက နာမည်သာအေးတာ လူကတော့ ပူသလားမမေးနဲ့။ ရေဆူအမှတ်ကိုရောက်တယ်။ ဒီတိုင်းနေရင်တော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ အရက်ကလေး သောက်ထားရင်သာ ပြဿနာရှိတာ။ ကိုအေးနဲ့ ကိုစီတုတ်ဆိုတာကလည်း မရဘူးလေ။ စီးပွားဘက်ဆိုတွေ ဆိုတော့ မဆက်ဆံလို့လည်းမရဘူးလေ။ စီးပွားဘက်ဆိုတာက ဒီလို။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ဆိုက်ကားကို ကိုအေးက အကြွေးစီးတယ်။ ကိုအေးဆီက ပိုက်ဆံကို လခထုတ်ရက်မျိုးမှာ ကိုစီတုတ်က ချေးတယ်။ လက်ဘက်ရည် ဆိုင်မှာဂဏန်းအတူတွက်တယ်။ ဒါကိုပြောတာ….။ အဲ ကိုအေးက ကိုစီတုတ်တို့အိမ်မှာအရက် လာသောက်လေ့ ရှိတယ်။ ကိုအေးမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ အိမ်မှာက လူစုံနေကျ။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ…. ကိုဖေတို့၊ ကိုချင်းမြင့်တို့၊ ကိုအောင်မိုးတို့ အားလုံး ကိုစီတုတ်ကလွဲရင် လူပျိုကြီးတွေချည်းပဲ။
ကိုစီတုတ်အိမ်မှာ လာစု ရခြင်းအကြောင်းရင်းက။ မသွယ်က လုံးဝမငြိုငြင်တတ်ဘူး။ ဘယ်ငြိုငြင်ပါ့မလဲ။ သူက ဝင်းသူဇာကပေးတဲ့ အရက်ပုလင်းကို လေးရာ့ငါးဆယ်နဲ့ဝယ်ထားပြီး ဟိုလူတွေ အရက်လိုတဲ့အချိန် ဝယ်မရတော့တဲ့ အချိန်တွေမှာ ခြောက်ရာမျိုး၊ ခုနစ်ရာမျိုးနဲ့ ပြန်ရောင်းတာတို့..။ ခြောက်ဆယ်တန် အမြည်း လုပ်ပေးပြီး အမြည်းချည်းပဲ ၁၀၀ ကျတယ် ဆိုတာမျိုးတို့ ဆိုတော့ သူ့ယောက်ျား အရက်ဖိုးလောက် ကာမိပြီးသား။
စကားချော်သွားတာနဲ့ ကိုအေးအကြောင်းတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။ ကိုအေးလည်း လူပျိုကြီးထဲက လူပျိုကြီးတယောက်ပေါ့။ အဲဒီအခင်း မဖြစ်ပွားမီက ကိုအေးမှာ ရည်းစားတယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ရွာထဲက ကောင်မလေးပဲ။ ကောင်မလေးက ချောချောလေး။ ပြီးတော့ ကိုအေးထက် ၁၃ နှစ်လောက်ငယ်တယ်။ လူပျို ကြီးတွေ ကြားထဲမှာတော့ ကိုအေးက စန်းပွင့်သူပေါ့။ ကိုအေးတို့ ချစ်လိုက်ပုံကလည်း သည်းသည်းလှုပ်။ သူတို့ စုံတွဲက ကိုစီတုတ်တို့ အိမ်မှာ လာချိန်းတွေ့နေကျ။ ကောင်မလေးဆို မသွယ်သုတ်တဲ့ သင်္ဘောသီးသုတ် ကောင်းလွန်းလို့ဆိုလို့ မသွယ်က ခဏခဏ သုတ်ကျွေးခဲ့ရတာ။
ကိုစီတုတ်တို့ အုပ်စုကတော့ အဲဒီကာလက ဘီလူးကြီးထိုးတဲ့ တယောသံကို နေ့တိုင်း နားဆင်နေရတာ။ ဟုတ်တယ် ကိုအေးက လူကြမ်းကြီး။ ကောင်မလေးက သေးသေးသွယ်သွယ်လေး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း တွေကတော့ ဝမ်းသာကြပါတယ်။ ကိုအေးအတွက် စိတ်အေးရတာပေါ့။ ကိုအေးက လူပျိုကြီးဖြစ်တဲ့အပြင် တကောင်ကြွက် တမျက်နှာလေ…..။
ဒါပေမယ့် တနေ့မှာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး။ ကောင်မလေးနဲ့ကိုအေးတို့ ခါတိုင်းလိုပဲ အလုပ်အတူ သွားကြတာ။ စိတ်ကောက်တာ ဘာညာလည်းမရှိဘူး။
ညနေ ကိုအေးစောင့်နေကျ နေရာမှာသွားစောင့်တော့ ကောင်မလေး ပေါ်မလာဘူး။ အဲဒါနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်၊ ဆေးရုံတွေ ရဲစခန်းတွေ အကြောင်းကြား….။ ဘယ်သူကမှ လင်နောက်လိုက်တယ်လို့ မထင်ကြဘူးလေ။ ကိုအေးက ရှိနေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက တကယ့်ကို လင်နောက်လိုက်သွား ခဲ့တာပါပဲ။ ကိုအေးရဲ့ အသည်းကွဲဇာတ်လမ်းပေါ့။ ကိုအေးတို့ ကွဲလိုက်တဲ့ အသည်းဆိုတာ ဟက်တက်ပဲ။ ကိုအေး ရေဆူအမှတ်ကို ရောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းက ဒါပါပဲ။
သူငယ်ချင်းအားလုံးက ကိုအေးဆိုးသမျှ သည်းခံကြပါတယ်။ သူ့ခမျာ ချစ်ကံခေရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ အရက်အတူ သောက်ကြရင်လည်း အဲဒီအကြောင်း စကားမစကြပါဘူး။ ပြဿနာဖြစ်ပြီး သုံးလလောက် ကိုအေးရွာက ပျောက် သွားသေးတယ်။ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းကိုမသိတာ။ ဘယ်သူမှလဲ လိုက်ရှာလို့ မရဘူး။
နာထားတဲ့ တိရစ္ဆာန် တကောင်လိုပေါ့။ အနာဖေးတတ်မှ ပြန်ရောက်လာတာ။ ပြန်ရောက်လာတော့လည်း ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ။ ဘယ်သူကမှလည်း သူ့ရှေ့မှာ ဒီအကြောင်း မမေး၊ မပြောကြဘူး။ ဒီလိုပဲ ကိုစီတုတ်အိမ်မှာ ဆုံကြ၊ သောက်ကြပေါ့။
တရက်တော့ ကိုအေးကြီး ပေါက်ချလာတယ်။ အိမ်မှာ မသွယ် တယောက်တည်း။ မသွယ် အလုပ်တွေ ကူလုပ်ပေး မယ်ဆိုပြီး ကလေးလည်း ဝိုင်းထိန်းပေး၊ အဝတ်တွေ လျှော်ပေး၊ ပန်ုးကန်တွေ ဆေးပေးနဲ့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူး။ မသွယ်ကလည်း ကျေးဇူးတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မနေ့ညက ကိုစီတုတ်တို့ လက်ကျန် တပိုင်းထုတ်ပေးပြီး လက်ဘက် တပွဲ သုတ်ပေးလိုက်တယ်။
ညနေကျတော့ ကိုစီတုတ် ပြန်လာတယ်။ ကိုစီတုတ် ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူ့တပိုင်းက မရှိတော့ဘူး။ ကိုစီတုတ်လည်း ဆိုက်ကားနင်းတော့ ဒီနေ့အုံနာကြေးအပြင် မြတ်မြတ်ကလေးရလို့ ဆိုပြီး တလုံးဝင်ဆွဲလာတာ။ ကိုအေးကြီးကိုမြင်တော့ အဖော်ရပြီဆိုပြီး တန်းထိုင်တော့တာပဲ။ ခဏနေတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုအောင်မိုးနဲ့ ကိုချင်းမြင့်တို့ ရောက်လာကြတယ်။ ဝိုင်းက လုံးဝကောင်းသွားပြီ။
မသွယ်ကလည်း ကိုအောင်မိုးလုပ်ခိုင်းတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးသုတ်တပွဲနဲ့ ကြက်ဥမွှေကြော်တပွဲ လုပ်ပေးပြီး ကလေးသိပ်ဦးမယ်ဆိုပြီး အထဲဝင်သွားတယ်။ အခု သူတို့ တလုံးစကိုင်ချိန်မှာ ကိုအေးက ရှေ့မှာ တပိုင်းဝင်ပြီး သွားပြီ။ ကိုအေးရဲ့ ထူးခြားချက်က သူဘယ်တော့မှ မမူးဘူးဆိုတာကို ပြချင်တာပဲ။ မမူးဘူးဆိုတာ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ မူးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တချက်တချက် သူ့မျက်လုံးကြီး ပြူးပြူးပြတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတော်တော်မူးနေပြီ ဆိုတာ သိသာတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဧည့်သည်ရောက်လာတယ်။ ဧည့်သည်ကတော့ ကိုအောင်မိုးရဲ့ညီ….။ ဝင်းကျော်တို့ လင်မယား။ လင်မယားမှ တကယ့် ပူပူနွေးနွေး လင်မယား။ ခိုးပြေးတာ တပတ်မပြည့်သေးဘူး။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ အိမ်ကို လာလည်ကြတာတဲ့။ ညားကာစ လင်မယားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း ကြားလေသွေးတောင် ဝေးမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကိုအောင်မိုးတို့ ကိုချင်းမြင့်တို့က ဝင်းကျော်ကို စ၊ ဝင်းကျော်က သွားကြီးဖြီးပြီး တဟဲဟဲနဲ့။ ကောင်မလေးက ရှက်…။
အားလုံးက သူတို့စုံတွဲဆီမှာ အာရုံရောက်နေကြတယ်။ သူတို့စုံတွဲကလည်း တယောက်ကိုတယောက် အသုတ် ခွံ့ကျွေးလိုက်။ ကြက်ဥကြော်ခွံ့ကျွေးလိုက်နဲ့ မောင်စားလေ… အချစ်စားလေ… လုပ်နေကြတယ်။
အဲဒီမှာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ကိုအေးကြီး သူ့ဘေးက ကြောင်လေးကို လည်ပင်းကနေညှစ်ပြီး မ လိုက်ပါလေ ရော။ အားလုံးအံ့သြတကြီးနဲ့ သူ့ဆီကိုအာရုံရောက်သွားကြတယ်။ ကိုစီတုတ်က..
“ဟေ့လူ..။ ကိုအေး ပြန်ချထားလိုက်ဗျာ” လို့ပြောတာကို ပြန်မချတဲ့အပြင် သူ့လက်ကြီးနဲ့ ပိုပြီးတော့တောင် ညှစ်ပြလိုက်သေးရဲ့။
“ဟေ့လူ…. ဟေ့လူ မလုပ်နဲ့နော် ကျုပ်ပြောနေတယ်။ ပြန်ချထားလိုက်”
ကိုစီတုတ် အသံလည်းတုန်လာပြီး ကြောင်ကလေးက သူ့လက်ထဲမှာ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နဲ့ ဖြစ်နေပြီ…. ။ ကိုစီတုတ် တချက် ကြုံးအော်လိုက်တယ်။
“ကိုအေး … မလုပ်နဲ့လို့ပြောနေတယ်။ ခင်ဗျားကို ကျုပ်ထိုးမှာနော်”
ပြောသာပြောရတယ်။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ဗလက ကိုအေးရဲ့ တဝက်ဘဲရှိတယ်။ ဘေးက လူတွေလည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်ပြီး ကိုအေး ကိုအေးနဲ့ ကယောင်ကတမ်း အော်နေကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုအေးက “အား” ဆို တချက်အော်ပြီး ကြောင်ကလေးကို ဖုတ်ကနဲ လွှတ်ချလိုက်ပါလေရော။ အော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွင်းအား တွေ ထုတ်သုံးလိုက်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် အမြင့်ကနေ ပစ်ချခံလိုက်ရလို့လား မသိဘူး ဖုတ်ကနဲ ပြုတ်ကျလာတဲ့ ကြောင်လေးဟာ မြေကြီးပေါ်မှာ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် နှစ်ချက်လောက် အကျောဆွဲပြီး ငြိမ်ကျသွားတယ်။
အဲဒီမှာ ကိုစီတုတ်လည်း ဝုန်းကနဲ ကိုအေးကို ခုန်အုပ်ပြီး ဝင်လုံးတော့တာပဲ။ သူတပြန် ကိုယ်တပြန် နှစ်ချက်စီ လောက် ထိုးပြီးတာနဲ့ အားလုံးက ဝိုင်းဖြေပြီး ကိုအေးကို အပြစ်ဝိုင်းတင်ကြတာပေါ့။ အားလုံးက ကိုစီတုတ်နဲ့ ကြောင်ကလေးရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုကို သိထားကြတော့ ကိုအေးကို ခပ်ဖိဖိလေး ပြောလိုက်ကြတယ်။ တရောက် တပေါက် ဝိုင်းပြောလိုက်ကြတာ…. ကိုအေးခေါင်ကို မဖော်တော့ဘူး။ ခဏနေတော့မှ အားလုံးကို မျက်လုံးပြူးကြီး နဲ့ ကြည့်ပြီး ငိုသံကြီးနဲ့…..။
“မင်းတို့ ငါ့ကို … ငါ့ကို ပြောရက်ကြတယ်။ ငါ… ငါ..” ဆိုပြီး ဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်တော့ဘဲ ချာကနဲ လှည့်အထွက် အပြင်က အမှောင်ထုထဲ ဝင်သွားပါလေရော။ မသွားခင်မှာ သူချမ်းတယ်ဆိုလို့ ကိုစီတုတ်ပေးဝတ်ထားတဲ့ ဂျာကင်ကိုပါ ချွတ်ပေးခဲ့ပြီး စွတ်ကျယ်လေးနဲ့ ထွက်သွားတာ..။ အားလုံးလည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတော့ဘူး။
ကြောင်ကလေးဆီပဲ ပြေးရမလား။ ကိုအေးနောက်ပဲ လိုက်ရမလား။ ကြောင်နေကြတယ်။ ရာသီဥတုက အချမ်းသည်းတဲ့ ဆောင်းတွင်းကြီး။ ကိုအေးတယောက် အဲဒီကတည်းက ရွာကပျောက်သွားလိုက်တာ။ ပေါ်ကိုမလာတော့ဘူး။ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေလည်း ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။
သတိရလို့ ကိုစီတုတ်ကြောင်ကလေးဆီ ပြေးသွားကြည့်လိုက်တော့ ကြောင်ကလေးက အသက်မရှိတော့ဘူး။ ကိုစီတုတ် ကြောင်ကလေးကို ကိုင်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေချိန်မှာ မသွယ် အိပ်ခန်းထဲက ထွက်လာတယ်။ ကိုစီတုတ် ယောင်တောင်တောင်နဲ့ အိမ်ထောင့်မှာ ထောင်ထားတဲ့ တူရွင်းကို သွားကိုင်တယ်။ မသွယ်က….
“ကိုစီတုတ်…. ရှင် ဘာလုပ်မလို့လဲ”
“ငါ… ငါ…. မီးမီးလေးကို သွားမြှုပ်မလို့”
“ဘာ… ရှင်က သွားမြှုပ်မလို့ ဟုတ်လား။ မီးမီးလေးတွေ ဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့။ ဒါ …. ကြောင်နော်… ကြောင် သိရဲ့လား..။ သွား…. ရေနွေးသွားတည်”
ရုတ်တရက်တော့ အားလုံး သဘောမပေါက်ကြဘူး။ အားလုံးကြောင်ပြီး မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မသွယ်တယောက်တည်း အားလုံးကို စီစဉ်သွားတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မသွယ်က ဆရာပဲ…။ မသွယ် ခိုင်းတာကို အားလုံးက ဘာမှ စောဒကမတက်ဘဲ လုပ်ပေးကြတယ်..။ နောက်ထပ် သုံးနာရီလောက် အကြာမှာ တော့ မသွယ်တို့တဲလေးထဲက မဆလာနံ့ တသင်းသင်းနဲ့ ဟင်းနံ့ ထွက်လာတယ်။
ဆောင်းညရဲ့ ခရစ္စမတ် တေးသွားတွေနဲ့အတူ မသွယ်ရဲ့ ဟင်းနံ့ဟာလည်း ပြောစမှတ် ပြုစရာတခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လောက်တောင် ပြောစမှတ်ပြုသလဲ ဆိုတော့ အဲဒ်ီညက မလာတဲ့ ကိုဖေတယောက် ကိုစီတုတ်ကို လုံးဝ စကား မပြောတော့ဘူး။ ဘယ်လိုမှလည်း ရှင်းပြလို့ မရတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကိုစီတုတ်ရဲ့ တဦးတည်းသော အဒေါ်က သူတို့ကို အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ အဒေါ်က ကြောင်ကလေးသေသွားတာကို စိတ်ဆိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောင်သေကို ဟင်းချက်စားလို့ စိတ်ဆိုးတာ… တဲ့။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသွယ်က ဒေါ်ဘူချီ တရားခံလို့ စွပ်စွဲတယ်။ ဒေါ်ဘူချီနဲ့ မသွယ်တို့ အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ကြတယ်။
ကိုစီတုတ်ကတော့ မသွယ်တရားခံဆိုပြီး မသွယ်ကို ပြဿနာရှာတယ်။ လင်မယား ရန်ဖြစ်လိုက်ကြတာ… ကိုစီတုတ် တကိုယ်လုံးလည်း လက်သည်းရာတွေနဲ့ …. မသွယ်လည်း နဖူးမှာ ဘုကြီး တလုံးထွက်လို့…. လင်မယားကွဲကြမလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မကွဲပါဘူး။ ဘယ်ကွဲလို့ ဖြစ်မလဲ။ သူတို့ လင်မယားက တော်တော်လိုက်ဖက်ညီတာ။ ဒါကလည်း တဒင်္ဂ လောဘစိတ်ကြောင့် ဖြစ်ရတာဆိုပြီး နောက်ကို ဒီလို သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မလုပ်ကြဖုိ့ ကတိ ထားလိုက်ကြတယ်။
ခုတော့လည်း အဆင်ပြေလို့။ မသွယ်ကလည်း ကလေး ခါးတစ်ခွင်ပြီး ရွာထဲ အတင်းလိုက်ပြောလိုက်၊ ရန်ဖြစ်လိုက် နဲ့ … ။ ကိုစီတုတ်ကလည်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သောက်လိုက်ပေါ့။ ရွာထဲက ကြောင်ရှင်တွေ ကတော့ နည်းနည်း သတိပြန်ထားရတာပေါ့..။
ကိုစီတုတ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဝိုင်းဖွဲ့တိုင်း … မူးလာကြပြီဆိုရင် တယောက် ကိုအေးလို့ စလိုက်တာနဲ့ အားလုံး တယောက် တပေါက် .. ကိုအေးအကြောင်းကို ပုံပြင်တပုဒ်လို ပြန်ပြောပြဖြစ်ကြတယ်။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ သူတို့ ကြောင်မွေးဖူးတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ဘယ်သူမှ စကားမစကြဘူး)
ကိုအေးကြီးကောင်းကြောင်းတွေ ကိုပဲ ရှာကြံပြောကြတာပါ။ အဲဒီလို ကိုအေးကိုလွမ်းပြီဆိုရင် အရက်က မလောက်တော့ဘူး။ မသွယ်ဝယ်ထားတဲ့ အရက်ကို ဈေးကြီးပေးပြီး ပြန်ဝယ်ကြတယ် ….။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ သတိထားထား …. ကိုစီတုတ်နဲ့ မသွယ်တုိ့ရဲ့ ဂေဟာမှာ တခါတခါတော့ မဆလာနံလေး သင်းပျံ့လာတတ်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ ကြောင်တကောင်ပျောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပေါ့ … ။ ။
Saturday, August 16, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Saturday, August 16, 2008 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.